Umzimvubu Local Municipality Rebukes Violence Against Women
You are here: Home / News / Umzimvubu Local Municipality Rebukes Violence Against Women
Isizwe sase-Afrika simanyene sibhiyozela lenyanga ka-Canzibe njengenyanga yama Afrika ephelele. Njengoko eli loMzantsi Afrika likhethe lonyaka njengonyaka weqhawe lomzabalazo utata u-O.R.Tambo, le nyanga iphantsi kwesihloko esithi “Ukwakha kwaye nokukhulisa i-Afrika kunye nelizwe elingcono”. Eyona njongo yalenyanga kukukhuthaza nokuvelisa indawo kunye namathuba okusombulula ingxaki ezijongene nabemi beli, ekuhlaleni kunye nokubandakanywa kwabahlali kwizinto ezichaphazela bona okanye kwindawo leyo bakuyo.
Lo maspala wasemzimvubu uya kwakhuthaza ukupheliswa kokuhlukunyezwa kwabantu abangomama kunye nabantwana. Sithi asivumelani nezenzo zokuphathwa gadalala kwabantu ababhinqileyo kunye nabantwana ngabantu abangamadoda, banintsi ke abantu abathi babengamaxhoba wezizenzo ezingavumelekanga . Siyabakhuthaza ke nabo bazibona bengenamandla okuxela abenzi beziziganeko ukuba bayaleze kwindawo ezifanelekileyo kunye nokubamelwane ukuze kubanjwe abo bathi bazenzele kubantwana kunye nomama.
Ukusokola kwabantu abantsundu kusuka kude njengoko eyona nto ikhuthazwa ngamandla ngabemi beli kukubambisana kunye nentsabenziswano phakathi kwalamazwe ase Afrika ngaphezulu kokusebenzisana namazwe angaphandle, oku kuchaza ukuba wonke le mazwe eli angancedisana ngayo yonke indlela edingekayo nefunekayo oko ke kuthelela ekukhuleni komnotho weli lomzi ontsundu futhi injongo ibe kukuphuhlisa lomzi ontsundu uphela. Eli lomzantsi Afrika lizibona lidlala indima ebalulekile nephambili ekuphuhliseni ubudlelwane, intsebenziswano kunye nobambiswano kulamzwe eAfrika nto leyo ibonakaliswa kukwamkela nokuncedisana nabo bonke abantu base Afrika. Kulenyanga siphinda sibhiyozele ukusekwa kombutho oququzelela indibano phakathi kwalamazwe eAfrika eyasekwa ngomhla ka 25 yalenyanga ngonyaka ka 1963, ikwaphinda ibe yilemini apho kwathatyathwa isigqibo sokuba usuku lwe 25 May iyakuba lusuku lwama Afrika. Njengokuba iAfrika inamazwe ohlukeneyo amanintsi, sinento efanayo kuba sonke sikholelwa kwinto enye kwaye nokuba usuka eKenya, Ghana okanye nakweliphi na ilizwe kulomandla weAfrika siyazalana kwaye likhaya labo eli.
Lo maspala wasekuhlaleni emzimvubu ugqibe ngelokuba ubambe umhlangano wokunikezela ngenkonzo eluntwini eyaziwa ngokuba yi-Service Delivery Imbizo ebanjwa yonke iminyaka le ngolwesithathu xa kuphela kanye le nyanga yama Afrika emabaleni aseMsukeni emaXesibeni ngentsimbi yeshumi kusasa.​​​​​​​